SANNAD CUSUB, BILOW CUSUB - SOMALI BELIEVERS FELLOWSHIP
​Haddaba, Masiixiyiintu sida dadka kale, go'aanno ay naftooda ku beddelayaan sannadka cusub bilowgiisa ma gaadhi karaan? Baybalku ma carrabaabin inaynu bilowga sannadka cusub oo keliya is beddel samayno, laakiinse wuxuu haddana ina barayaa inaynu nafteena mar kale imtixaano, "Jidadkeenna aynu baadhno, oo aynu tijaabinno, oo aynu mar kale Rabbiga u soo noqonno." (Baroorashadii Yeremyaah 3:40). Nebi Daa'uud wuxuu Ilaahay weydiistey:​
​ "Haddaba na bar inaannu tirinno maalmaha cimrigayaga, si aannu u helno qalbi xigmad leh" (Sabuurradii 90:12).
​Markaa, ma khaldana inuu qofku wakhtiyo kala duduwan sida bilowga sannadka cusub naftiisa dib u qiimeeyo oo uu is beddel sameeyo. Laakiinse, waa inuusan is beddelkaasi noqon mid aynu isku deyeyno inaynu kartideena ku samaynayno waase inuu noqdaa mid aynu Ilaahay la kaashanayno, "Qalbigaaga dhammaantii Rabbiga ku aamin, Oo waxgarashadaadana ha isku hallayn. Jidadkaaga oo dhan isaga ku qiro, Oo isna waddooyinkaaguu toosin doonaa" (Sabuurradii 3:5,6).
Go'aannadaasi ha noqdeen kuwo Ilaahay raali ka yahay oo Isaga maamuusaya, ee yaanay kuwo ah naf jeclaysi (selfish), si uu Ilaahay qorshayaashaada is beddel u hirgeliyo, "Qalbiga qasdiyadiisa dadkaa leh, Laakiinse carrabka jawaabtiisu xagga Rabbigay ka timaadaa. Nin jidadkiisa oo dhammu waa la nadiifsan yihiin isaga, Laakiinse Rabbigu ruuxyaduu miisaamaa. Shuqulladaada Rabbiga ku aamin, Oo fikirradaaduna way taagnaan doonaan" (Maahmaahyadii 16:1-3) Waxyaalo badan ayaynu qalbigeena ka qorshaynaa, laakiinse, Ilaahay ayaa ugu dambaysta hirgelintooda iska leh.
In kasta oo ay haboon tahay in sannadka bilowgiisa go'aano cusub la qaato, haddana marna ha ilaawin inay ta ugu muhiimsani tahay xidhiidhka joogtada ah ee aynu maalin kasta iyo saacad kasta Ilaahay la leenahay. Baybalku wuxuu inooga digayaa inaynu berito isku hallayno:
"Berrito ha ku faanin, waayo, ma ogid waxay maalinu keeni doonto" (Maahmaahyadii 27:1).
Aynu maalin kasta Ilaahay adeecno oo Erayadiisa xejino. Kitaabka Quduuska ahi wuxuu inagu odhanayaa, "Waxaa barakaysan kuwa ereyga Ilaahay maqla oo xajiya" (Luukos 11:8). Maaha berri ama saadambe, laakiinse, hadda!
Waxaanu idiin rajeyneynaa inuu Sannadka Cusub ee 2017 idiin noqdo mid barakaysan.